Izikhungo Zasebhange Zase-Offshore ezingcono kakhulu kanye neJurisdictions
I-Offshore Banking Jurisdictions Ehlu ku-oda
Nalu uhlu lwezinto ezingcono kakhulu nezinconyiwe kunazo zonke amabhange ase-offshore amandla. Ngenhlanhla, senze ucwaningo olunzulu. Ngakho-ke, singanikeza izeluleko nezeluleko zokwenza umsebenzi wakho ube lula. Ngakho-ke, la mazwe anemithetho ehlinzeka ngokuphepha kwezimali, ubumfihlo, ukwenza lula futhi anikeze imbuyiselo yokuncintisana ngokutshalwa kwezimali.
Ukuze uthole imali yokuqala ye $ 250,000:
I-OffshoreCompany.com ibheka ama-akhawunti asebhange eSwitzerland nakwezinye izindawo ezinhle. Ngakho-ke, sicela ugcwalise ifomu lokubonisana noma usebenzise enye yezinombolo zocingo kuleli khasi. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela sonke isigaba sethu ku I-Swiss Banking.
Ukuze uthole imali ngaphansi kwe $ 250,000, nansi iziphathimandla eziphakanyisiwe:
I-Carribean (amazwe amaningi - shayela inombolo yocingo engenhla ngemininingwane)
I-Carribean neBelize (bheka underlines ezibomvu)
Emazweni angenayo intela, ukuhlolwa kokuvula ama-akhawunti kuphansi. Ngakolunye uhlangothi, ubumfihlo buphakeme. Embusweni weYurophu, noma kunjalo kukhona izivumelwano ezandisa izidingo ezifanele zokukhula kwamabhange angamalungu. Ngakho-ke, abanikazi bama-akhawunti abangahle badinga ukukhiqiza imibhalo eyengeziwe yekhasimende lakho. Babize lesi sivumelwano ngokuthi i-European Union Savings tax Directive 2005.
Kwathi ngoDisemba 2014, uMkhandlu we-European Union wamukela iDirective 2014 / 107 / EU. Lokhu kuhlinzeka ngokubambisana kwebhange / nohulumeni ezindabeni zentela ("I-EU Mutual Usizo Directive"). Ngakho-ke, imibiko yamabhange ithole inzalo nezabelo, kanye nenye imali engenayo yediphozithi. Ngalo, amazwe atshintshana ngolwazi lwentela namanye amazwe.
Lemiyalo ingathinta kabi ubumfihlo bebhange emazweni athile angaphansi kwayo. Ngaphezu kwalokho, i-EU tax Directive ingakhawulela ubumfihlo kanye nobumfihlo babadiphozi emabhange akude. Ukucaca, lokhu kusebenza kuphela kumabhange akhiwe ezindaweni ezingaphansi kwale mithetho.
Amazwe Ngaphansi Kwe-EU Banking Directive
Njengalokhu kulotshiwe, amazwe alungu le-European Union alandelayo:
I-Austria, iBelgium, iCyprus, iRiphabhlikhi yaseCzech, iDenmark, i-Estonia, iFrance, iFrance, iGrisi, iHungary, i-Ireland, i-Italiya, iLatvia, iLithuania, iLuxembourg, iMalta, iNetherlands, iPoland, iPortugal, iSlovenia, iSlovenia, iSpain, iSweden, kanye e-United Kingdom. Ngaphezu kwamazwe e-EU, lo mhlahlandlela uhlanganisa nezivumelwano phakathi kwe-EU ne-Andorra, iLiechtenstein, iMonaco, iSan Marino, neSwitzerland.
Noma imiphi imingcele eyingxenye yomkhumbi ohlanganyelwa ingaphansi kwe-EU tax Directive. Ngaphezu kwalokho, noma yimaphi amazwe angaphansi kokubusa, noma okunikela ngalezi zizwe nawo. Abanye futhi bangalandela ngokuzithandela, njengeSwitzerland ne-United States.
Njengoba kushiwo, i-2014 yisivumelwano phakathi kwamazwe angamalungu e-EU kanye nohlu lwamazwe aseduze. It, ikakhulukazi, ivumela ukushintshaniswa kwemininingwane yezezimali noma yokushintshana. I-EU ibiza lesi sivumelwano ngokuthi "ukushintshwa okuzenzakalelayo kwenketho yolwazi" futhi kuwuphawu lwe-Directive.
Iziphathimandla ze-Offshore ezingagcinwa yimithetho ye-EU noma izinkomba azihlanganyeli kulesi sivumelwano. Ngakho-ke, banikela kubakhokhi balezo zingxenye ezikhulayo zezimfihlo.
Amanye Amalungelo Wasebhange
Kunamanye amandla amaningi aphesheya kwezilwandle anikela ngezinzuzo eziningi ezifanayo ezenziwa yizihumusho ze-EU. Kepha aziboshelwe ku-EU Directive. Ngokusobala, lokhu kuvame ukucatshangelwa okubaluleke kakhulu kumtshalizimali noma umdambisi ofuna ubumfihlo. Lokhu kungenxa yokuthi ungahle ufune inzuzo ethile engaqondiswa amandla okuya ngokubuswa kokuqondisa kwe-EU Directive. Ngempela, lokhu ukucabanga okubalulekile. Kodwa-ke, akufanele ucabange ngokuzenzakalelayo ukuthi kusiza kakhulu ukuhlala ebhange endaweni elawula i-non-EU Directive.
Ake sithi umuntu obamba imali angahlangabezana nezidingo zokuqala zenani lediphozi. Unezinhloso zakhe zebhange ngokuhambisana nebhange lakhe namandla alo. Ngakho-ke, izindawo ezisogwini lolwandle ezinjengeSwitzerland zingahlangabezana kangcono nezidingo zakhe. Kodwa-ke, kunezifiso ezinekhono kakhulu ezingekho ngaphansi kwe-EU tax Directive. Bangaba nezidingo zokuqala zediphozi eziphansi kakhulu kunalezo “ezimisiwe” zomthetho. Isibonelo, ezinye izindawo ezifana neSt. Vincent neBelize zingadinga imali engaphansi kwe- $ 2000 US ukuqala.
Ngaphambi kokuqhuma kwe-Intanethi kwaphakathi ne-90 kanye nokuhlasela kwamaphekula kwe-9 / 11, izwe lasebhange lalilula kakhulu. Isibonelo, abanikazi bama-akhawunti nalabo abangahle bafake imali emabhange aphesheya kwezilwandle babefanele bangene ebhange. Lokhu kwakudingeka ukuze kuvulwe i-akhawunti. Ngenye indlela, bangavele bathumele ummeli ogunyaziwe ukwenza kanjalo. Kwakudingeka basungule ama-akhawunti, bakhokhe imali, noma benze izivumelwano uqobo. Indlela yakudala “yokukhiya nokhiye” ibusezingeni eliphakeme.
Kodwa-ke, kusukela maphakathi ne-90's, kube nokushintsha okukhulu. Kube nokuqhuma okuqinisekile kubuchwepheshe obukade bungacabangi ezimbonini eziningi zensiza emhlabeni jikelele. Lokhu-ke kufaka phakathi i-Banks engaphesheya kwezilwandle.
Ziyafika izinsuku zokuthi empeleni ungene ebhange. Manje, iningi lezinsizakalo eliseduze nekhibhodi yakho eseduze. Njengoba wazi, manje sinokufinyelela kwewebhu okugcwele emhlabeni wonke kuma-akhawunti. Siphinde sibe namakhadi wesikweletu afana namakhadi wedebithi kanye nokufika kokudluliswa kwemali kagesi. Ngaphezu kwalokho, ezandleni zethu kukhona amasiginesha abonakalayo, kanye nokufinyelela okungenamkhawulo ku-inthanethi. Ngakho-ke, ibhange elingaphesheya seliguqulwe laba yisixazululo esilula sabantu nezinkampani.
Akukhathalekile ukuthi ngabe ibhange lakho likulesi sifundazwe iGrand Canyon noma iGrand Cayman. Iningi lezici ezinikezwa ngamabhange ngokuchofoza nje kwegundane. Ake sicabange ukuthi uhlangana futhi unamathela kuzo zonke izinyathelo zokuphepha futhi uhlanganyela kuphela emisebenzini yezomthetho. Uma kunjalo, imfihlo yanoma yikuphi ukubeka noma ukutshalwa kwezimali kuphephile njengoba yayike yenziwa.
Ulwazi oluthe xaxa lwe-Offshore Banking
Ama-akhawunti asebhange ase-Offshore zisebenza ngendlela efanayo ne-akhawunti yasebhange yasekhaya ejwayelekile. Ibhange livula i-akhawunti. Kulapho, iklayenti lithola ikhadi lebhange lebhange noma ikhadi lesikweletu. Amadiphozi anokufinyelela ku-inthanethi. Ukwenza ukudluliswa kwentambo nokwenza imisebenzi ejwayelekile ye-akhawunti yasebhange kulula. Mane ungene ku-inthanethi bese ulandela imiyalo. Amabhange ase-Offshore anikeza eziningi zezinto ezifanayo ezilungele futhi eziningi zinikeza usizo olukhulu lwamakhasimende. Lapho ukhetha isikhungo sakho kubalulekile ukuthi ukhethe umhlinzeki ofanele isimo sakho.
Njengoba kushiwo, izikhungo eziningi zasebhange ezingaphesheya kwezilwandle zizokuvumela ukuthi usethe i-akhawunti yasebhange ngokufaka imali engaphansi kwe- $ 2000. Kwezinye izimo, ngokuya ngebhange, ungafaka okuncane. Ngaphezu kwalokho, bonke abahlinzeki bama-akhawunti asemabhange anconyiwe alawulwa kakhulu futhi alandela imithetho eqinile yobumfihlo yamazwe aphesheya. Ama-akhawunti wangasese ngokuvamile adinga idiphozithi yokuqala ephezulu. Kodwa-ke lokho kuxoxiswana ngokuya ngemigomo ye-akhawunti yonke kanye nokuqagela.
I-OffshoreCompany.com icwaninga abahlinzeki bezinsizakalo zezezimali emhlabeni wonke. Siyaqiniseka ukuthi amaklayenti ethu angafinyelela kuma-akhawunti abo ngocingo, ifeksi, i-imeyili ne-Intanethi. Ngaphezu kwalokho, senza konke esingakwenza ukuqinisekisa ukuthi bayazinaka izidingo zamakhasimende ethu. Futhi sifuna ukuqiniseka ukuthi sinobuhlakani futhi ngasese.
Izikhathi eziningi, ibhalansi ye-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya izothola inzalo. Ungacela nokuthi sibeke i-akhawunti yokutshalwa kwezimali phesheya kwezilwandle. Izinzuzo zenzalo nokutshalwa kwemali ngokuvamile azinayo intela yendawo ekuphathweni kwebhange. Inani lenzalo livame ukuba phezulu futhi imali iyancintisana. Izinkampani eziningi ze-500 zenhlanhla, kufaka phakathi nezinkampani zika-oyela zisebenzisa ithuba lokuba ngamabhange angaphandle. Ezinye izindawo ezithandwayo zentela ezinamandla zinezindawo eziningi zamabhange angaphansi kokukhetha kuzo.
Izikhungo zezimali ezisezandleni ezizimele azibikezi imininingwane yamaakhasimende kohulumeni bangaphandle. Abazibikeli nakwabo. Ngakho-ke kuye umnikazi we-akhawunti ukuthi enze njalo. Njengenkampani enomthwalo wemfanelo, kunjalo, sincoma ukuthi uhambisane ne Intela imithetho yomthetho ophoqelelwe kuwo. Amazwe amaningi, kufaka phakathi intela yase-US engenisa umhlaba wonke. Ngakho-ke, okokuqala sikusiza ukuthi usungule inkampani yakho ne-akhawunti. Ngemuva kwalokho, sinama-CPAs anolwazi oluningi kakhulu futhi ongasiza ekuvumelaneni nentela yemali yakho yaphesheya.
I-OsshoreCompany.com isungula izinkulungwane zezinhlaka zebhizinisi, ama-akhawunti asebhange, amasu okuvikela ubumfihlo kanye nezinhlelo zokuvikela impahla emhlabeni jikelele. Ukuvikela nokukhulisa imali yamakhasimende ethu yizinkinga zethu ezinkulu.
Izikhungo zasebhange zase-Offshore zinikeza izinzuzo ezahlukahlukene, uma kukhulunywa ngobumfihlo iSwitzerland kunzima ukuyishaya. Sinikeze isigaba ephelele Ibhange laseSwitzerland lapho ungafunda kabanzi mayelana nama-akhawunti asebhange angasese.